Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 243313 times)
« Reply #440 on: August 06, 2011, 11:27:22 AM »
" အား လုံး မှန် တယ်. "
သူငယ်ချင်း သုံးယောက် ရေချိန်ကိုက်ပြီး ညဉ့်နက်အချိန်တွင် အရက်ဘားမှ
ထွက်လာကြသည် ။ တစ်ယောက်က ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်ပြီး ပြောသည်။
" လမင်း ကြီးဟာ လေးထောင့်ကြီး ပါလား.. "
" ဘယ်ကလာ ဟုတ်ရမှာလဲ....တြိဂံ ပုံကြီး... "
" ဟေ့ကောင်တွေ ငြင်းမနေကြနဲ့ .. မင်းတို့ နှစ်ယောက်လုံး မှန်တယ်.. တစ်ခုက
လေးထောင့်.....နောက်တစ်ခုက တြိဂံ... "
" သိ ရ မယ် "
" ကိုစိုးမောင် ... ခင်ဗျား.. ပဲရစ်ကို ရောက်ဘူးသလား.. "
" ဟင့်အင်း မရောက်ဖူးဘူး.. "
" ဒါဆို...ခင်ဗျား ကျနော့် ညီမကို သိလိမ့်မယ်..၊ သူလည်း မရောက်ဖူးဘူး.. "
« Reply #441 on: August 06, 2011, 12:29:30 PM »
" ဖြစ် နိုင် ရင် ဆို ပါ တယ်.. "
လူနာကို ဆရာဝန်က စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးနောက် ပြောသည် ။
" အင်း...ခင်ဗျားဟာ တစ်ခုခုကို အာရုံ စူးစိုက်မှု များလွန်းလို့နာဗ်ကြောပန်း ရောဂါ
( Neurasthenia ) ဖြစ်နေတယ်..။ အကောင်းဆုံးကတော့ ခင်ဗျား အာရုံပြောင်း
ဘို့လိုတယ်..၊ အလုပ် လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ သီချင်းဆိုစမ်းပါ... "
" ဒေါက်တာ.. ဒါကတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး "
" ကျနော်က သုဿန်မှာ တွင်းတူးသမားပါ "
« Reply #442 on: August 06, 2011, 12:40:54 PM »
" အ နု ပ ညာ နှင့် ဘီ ယာ "
စွယ်စုံရ ဂီတပညာရှင်ကြီးကို သတင်းထောက်က မေးသည် ။
" ဆရာကြီးခင်ဗျား.. အသက် ၂၅ နှစ် အရွယ်အထိ ဆရာကြီးဟာ တယော ကို ပဲ
ထိုးခဲ့ပါတယ်...။ အဲ့ဒီနောက် မမျှော်လင့်ပဲ ဆရာကြီးဟာ စန္ဒရားဘက်ကို ပြောင်း
သွားခဲ့ပါတယ်.. ဘာဖြစ်လို့ ပါလဲ ခင်ဗျာ.. "
" တယောပေါ်မှာ ဘီယာခွက်ကို တင်ပြီး မောင်ရင် ထိုးဖူးလို့ လားကွ ဟေ.. "
" က တိ တည် သူ "
အိမ်ငှား ကိုမြကြီးက အိမ်ရှင် ဒေါ်ပုကို ပြောသည် ။
" ဒေါ်ဒေါ် ဒီလလည်း ကျနော် ဒေါ်ဒေါ့်ကို အိမ်လခ ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ခင်ဗျာ.. "
" ဘယ်လိုလဲ မောင်မြကြီး...၊ လွန်ခဲ့တဲ့ လ ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လ ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလကလည်း
မင်း ဒီအတိုင်းပဲ..မပေးနီုင်သေးဘူးလို့ပြောခဲ့ပါလား.. "
" ကျနော့် စကားကို ကျနော် ဘယ်မှာ ဖျက်လို့ လဲ ဒေါ်ဒေါ်.. "
« Reply #443 on: August 06, 2011, 01:09:44 PM »
" နောက် ဆုံး ဖြေ သိမ့် စ ရာ "
နီကိုလိုင်သည် ဆေးရုံတက်နေသော သူငယ်ချင်း အင်ဒရေ ထံ လူနာလာကြည့်သည် ။
အင်ဒရေ၏ ကုတင်ဘေးတွင် ဆေးနှင့် ပစ္စည်းအချို့ထားရန် ပေးထားသော စားပွဲပေါ်
`၌ ဗော့ဒ်ကာ အရက် တစ်ပုလင်း ထောင်ထားသည်ကို တွေ့ ရသည် ။ ပုလင်းထဲ`၌ အ
ရက် အနည်းငယ်သာ ကျန်တော့သည် ။ နီကိုလိုင် က ပြောသည် ။
" သူငယ်ချင်း.... မင်းအတွက် နောက်ဆုံး ဖြေသိမ့်စရာဟာ ဒါပဲလားကွာ "
" မဟုတ်ဘူး.... အံဆွဲထဲမှာ နောက်တစ်ပုလင်း အပြည့် ကျန်သေးတယ်.. "
« Reply #444 on: August 06, 2011, 01:38:30 PM »
" အ ဖေ့ ဖြေ ရာ နင်း သူ "
၀ီလျံ ကောလိပ်ကျောင်းမှ ယခုတင် ပြန်ရောက်လာသည် ။ ၀တ်ထားသော
ဘောင်းဘီရှည်မှာ လေးကွက်ကြား ၊ ခြေအိတ်မှာ ပိုးခြေအိတ် ၊ ကုတ်အင်္ကျီမှာ အနီ
ရဲရဲ တစ်ခြမ်း..၊ အစိမ်းရင့်ရင့် တစ်ခြမ်း ဖြစ်သည် ။ မြင်သူအားလုံးက ၄င်းကို လူထူး
လူဆန်းကဲ့သို့ကြည်ကြသည် ။ ဖခင် အလုပ်လုပ်သော ရုံးသို့သွားရန် ၀ီလျံ ဆုံးဖြတ်
လိုက်သည် ။ ဖခင်က ၄င်းကို ကြည့်ပြီး စိတ်ပျက်စွာ ပြောသည် ။
" ဟေ့ကောင်.. ဒီအ၀တ်အစားနဲ့မင်းကို ကြည့်ရတာ ရူးပေါပေါ.. ကြောင်တောင်တောင်
အကောင်နဲ့သိပ်တူတာပဲ.... "
ဤအချိန်တွင် ဖခင်၏ရုံးခန်းအတွင်းသို့အိမ်နီးချင်း အဖေ့ သူငယ်ချင်း အငြိမ်းစား ဗိုလ်
မှူးကြီး ရောက်လာပြီး ၀ီလျံကို တွေ့ သောအခါ ၀မ်းသာအားရ နှုတ်ဆက်သည် ။
" ၀ီလျံ..မင်းကို အခုလို မြင်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်က မင်းအဖေ ကောလိပ်က ပြန်လာပုံ
ကို သတ်ိရမိတယ်...တစ်ပုံစံတည်းပဲဟေ့... "
၀ီလျံ ပြုံးပြုံးလေး ပြန်ပြောသည် ။
" ဟုတ်ကဲ့ အန်ကယ်လ်... ဖေဖေကလည်း စောစောလေးကတင် ဒီအတိုင်း ပြောပါတယ်.. "
« Reply #445 on: August 06, 2011, 02:05:15 PM »
" ချစ် လိုက် တာ "
" ခင့်ကိုလေ.. မောင်က အသည်းထဲ အူထဲက စွဲစွဲမြဲမြဲ ချစ်နေမိပြီ ခင်ရဲ့"
" ရှင် တော်တော် ခေါင်းမာပါလား.. ၊ ရှင့်ကို ပြန်မချစ်နိုင်ဘူးလို့မနေ့ က
ကျမ အပြတ် ပြောပြီးပြီပဲ.... "
" အော်.....မနေ့ က ငြင်းလိုက်တာ ခင်ဗျားကိုး... "
" အ ရက် ရဲ့အ ကျိုး "
ပုံမှန် အရက်မူးပြီး ပြန်လာလေ့ ရှိသော ယောင်္ကျားကို မိန်းမလုပ်သူ မြည်တွန်
တောက်တီး နေသည် ။ နောက်ဆုံးတွင် နားငြီးလာသည်နှင့် ယောင်္ကျားက
" ဟေ့....ငါ အရက်သောက်တာကိုချည်း မင်းပြောနေတယ်. အရက်ပုလင်းအ
လွတ်တွေ ရောင်းလို့ ရတဲ့ငွေနဲ့မင်းကို ပါတိတ်ဝမ်းဆက် ၀ယ်ပေးတုန်းကတော့
ဘာမှ မပြောပါလားကွ..ဟေ.. "
« Reply #446 on: August 06, 2011, 02:16:17 PM »
" ဟဲလို.. တိရစ္ဆန်များ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အသင်းကပါလား "
" ဟုတ်ပါတယ်... "
" တစ်ယောက်ယောက်ကို လွှတ်ပေးဘို့မေတ္တာ ရပ်ခံပါတယ်..၊ ကျမအိမ်ရှေ့ 
၀င်းတံခါးက သစ်ပင်ပေါ်မှာ စာပို့ သမား က ထိုင်ပြီး ကျမခွေးကို စော်ကား
တပ်ကြပ်ကြီး မောင်ထွေး က ရဲဘော် မောင်မြကို ကြိမ်းမောင်းသည် ။
" လက်မောင်းပေါ်က အရစ်တစ်ရစ်တိုင်းမှာ ကလေး တစ်ယောက်ရှိတယ်
ဆိုတာ ဖော်ပြတာလို့ငါ့ ရည်းစားကို မင်းဘာဖြစ်လို့သွားပြောရတာလဲ
ကိုရီးကြပ်ရေ.. တိုက်ဆိုင်သွားတာ ခွင့်လွှတ်ပါ ..အဟီး
« Reply #447 on: August 08, 2011, 09:40:07 AM »
" အ ရှုံး ပေး ပါ ပြီ "
ဇိမ်ခံသင်္ဘောပေါ်တွင် လိုက်ပါလာသော ခရီးသည်များအား ဖျော်ဖြေရန် မျက်လှည့်ဆရာတစ်ဦးကို
သင်္ဘော ကပ္ပတိန်က ဖိတ်ခေါ်သည် ။ ကပ္ပတိန်မွေးထားသော ကြက်တူရွေးသည် မျက်လှည့်ဆရာ
မျက်လှည့် ပြသည့်အခါတိုင်း အမျိုးမျိုး ဒုက္ခပေးသည် ။ " ဖဲချပ်တွေ သူ့ ရဲ့ လက်ထဲမှာ " ဟူ၍
လည်းကောင်း ၊ " သူ ထုတ်ပြတဲ့ ယုန်က အစစ်မဟုတ်ဘူး..ပလပ်စတစ် " ဟူ၍လည်းကောင်း
မျက်လှည့်ဆရာ၏ လျှို့ ဝှက်ချက်များကို ကြက်တူရွေးက ဖော်ထုတ်လေသည် ။ မျက်လှည့်ဆရာလည်း
ရှက်ရှက်နှင့် အောင့်အည်း သည်းခံ၍သာ နေရ၏ ။
တစ်နေ့ တွင် သင်္ဘောနစ်မြုတ်၍ မျက်လှည့်ဆရာ ၊ ကြက်တူရွေးနှင့် သစ်သားပြား တစ်ချပ်သာ ရေ
ပေါ်တွင် ကျန်နေသည် ။ မျက်လှည့်ဆရာလည်း သစ်သားပြားကို ဆွဲယူကာ ရေပေါ်တွင် ဖော့နေသည် ။
" ကျနော် အရှုံးပေးပါပြီ ခင်ဗျာ.. ဒါပေမဲ့ သင်္ဘောကို ခင်ဗျား ဘယ်မှာ ၀ှက်ထားသလဲ ဆိုတာတော့ ပြော
ပြစမ်းပါ " ဟု ဆိုလိုက်သည် ။
« Reply #448 on: August 09, 2011, 09:27:37 AM »
" အ ချစ် ဆုံး ပဲ "
ညဉ့်နက်သန်းကောင်..ရင်တွေပူပြီး နိုးလာသည် ။ အရက်ရှိန်နှင့် မူးနေတုန်း ဖြစ်သည် ။
ကုတင်ဘေးတွင် ယောက္ခမကြီးက ထိုင်ရင်း ရင်ဘတ်ပေါ် လက်ဝါးလေးနှင့် အုပ်ပေးထား
သည် ။ မိန်းမကတော့ ကုတင်ခြေရင်းတွင် စိတ်ပျက်လက်ပျက် ထိုင်နေသည် ။
" သား..မောင်ရင်မောင်.. အမေ့မှာ သမီး လေးယောက်ရှိတယ်...သမက်လဲ လေးယောက်ရှိ
တယ်...သမက်တွေထဲမှာ..သားကို အချစ်ဆုံး ဆိုတာ သား သိတယ်မဟုတ်လား..အဲ့ဒါ သား
သားက အရာရှိကြီးဖြစ်လို့ပိုက်ဆံရှာနိုင်လို့အမေ့သမီးအပေါ်မှာ ချစ်မြတ်နိုးလို့မဟုတ်
ဘူး.. သားက ဟာသ စာရေးဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ ကွဲ့ . ဒါကြောင့် သားကို အချစ်ဆုံး
လို့ပြောရတာ.. နောက်ကို အရက်တွေ မသောက်ပါနဲ့ တော့ သားရယ်.. "
အမူးမပြေသေးသည့် ကိုရင်မောင့် စကားကြောင့် ယောက္ခမကြီး စကားမပြောတော့ပေ..။
မိန်းမဖြစ်သူပါ သူ့ အမေနှင့် လိုက်သွားတော့သည် ။
" ဟုတ်ကဲ့ အမေ... ကျနော်လည်း ယောက္ခမတွေထဲမှာ အမေ့ကို အချစ်ဆုံးပါ.. "
« Last Edit: August 09, 2011, 09:31:37 AM by tunaye2011 »
« Reply #449 on: August 09, 2011, 09:42:38 AM »
" ချစ် ရဲ့လား "
" မောင်... ကျမကို ချစ်ရဲ့ လားဟင်.. "
ထမင်းကြမ်းနှင့် ပဲပြုတ်ကို နံနက်စာအဖြစ် လွေးနေသော ယောင်္ကျားကို မိန်းမက
" မိန်းမရယ်.. ဒီမေးခွန်းကိုပဲ မနက်တိုင်း မေးနေတယ်.. ။ ဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်
ပြီး မောင်တို့လက်မထပ်ခင်ကတည်းက အဖြေ ပေးပြီးပြီ ထင်တယ်. .။ တကယ်
တမ်းဆိုရင် ဒီပျားရည်ဆမ်း ကာလ တစ်လျှောက်လုံးမှာ ထမင်းကြမ်းနဲ့ပဲပြုတ်ကို
မောင် ကြိုက်ရဲ့ လားလို့တစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ် မေးပါဦးလား.. " ဟု ယောင်္ကျား
က ညင်ညင်သာသာ ပြန်ပြောလိုက်သည် ။